ဧပြီ, 1913 ။
ကျိန် ဆို. ပူဇော်အတွက်ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောဆိုတာဘာလဲ
ဆည်းကပ်တဲ့နိယာမကိုအကြောင်းမရှိ, ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးနှင့်တဦးတည်းမြှုပ်နှံသောထိုအဘို့အခြို့သောစွမ်းရည်လုပျဆောငျဖို့အသငျ့ဆီသို့စိတ်ကိုတစ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆည်းကပ်အတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုအစေခံရန်, လုပ်ဖို့တဦးတည်း၏စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, နှင့်စွမ်းရည်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်နေဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အဆိုပါကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝသည်မိမိဆည်းကပ်၏ဖော်ပြတစ်ခုခုလုပ်နေတာကသူ၏ဆည်းကပ်ပြသနိုင်ဖို့တဦးတည်း impels ။ ဆည်းကပ်၏ဤချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အမြဲရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းပြုဘာကြောင့်ပြုမိသောအဘို့အကြောင်း၏အကြိုးပဖြစ်နိုင်သည်, အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သေးပါဘူး။
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝနှလုံးထဲကပြုမူ။ ဒါကြောင့်လက်ျာအချုပ်အခြာဖြစ်၏သော်လည်းနှလုံးထဲကဤ action, အစစ်အမှန်တိုးတက်မှုအတွက်မလုံလောက်သေးပါ။ အသိပညာသည်ပညာရှိသောအရေးယူမှုရန်လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဦးကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝနှင့်အတူလူသည်အများအားဖြင့်သရုပ်ဆောင်မတိုင်မီအကြောင်းပြချက်ကိုနားထောင်, ဒါပေမယ့်သူ၏စိတ်နှလုံး၌အာဏာရှင်သို့မဟုတ် Impulses သတင်းပို့အတိုင်းလိုက်နာမှကြိုက်နှစ်သက်သည်မထားဘူး။ သို့သျောလညျးကိုသာစိတ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အသိပညာ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကဝယ်ယူခြင်းရှိလော့။ တဦးတည်းရဲ့ဆည်းကပ်၏စစ်မှန်တဲ့စမ်းသပ်လေ့လာဖို့စဉ်းစားရန်သူမြှုပ်နှံသောကရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ကိုအလုပ်မလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းပြန်စိတ်ခံစားမှုအရေးယူသို့ကျရောက်နှင့်စိတ်ရှည်ရှည်နှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့စဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်လျှင်, သူကမျှစစ်မှန်သောဆည်းကပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝနှင့်တသားတသည်သူ၏စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ဆက်ရှိနေသေးဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူသည်မိမိဆည်းကပ်ဖို့အသိပညာ add မည်သည့်ရန်သူမြှုပ်နှံကြောင်းအစေခံရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးပွါးစေစဉ်းစားရန်ပါဝါရရှိသည်ဆိုပါက။
အဘယ်အရာကိုနံ့သာပေါငျး၏သဘာဝသည်နဲ့ Long အသုံးပြုမှုများတွင်ဖြစ်ဘူးပြီဘယ်လိုနေသလဲ?
နံ့သာပေါင်းကို၏သဘောသဘာဝကိုမြေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြေကြီး, လေးသောဒြပ်စင်တစုံတပါးကဲ့သို့, အနံ့၏အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကိုက်ညီ။ နံ့သာပေါင်းကိုသွားဖုံး, နံ့သာမျိုး, ဆီ, resins, မီးလောင်ရာကာလအတွင်းယင်း၏အငွေ့ကနေနှစ်သက်အနံ့ထွက်ပေးသောတောအုပ်တစ်ခုမွှေးကြိုင်အရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။
လူကိုစံချိန်အဖွဲ့အစည်းများ, အကောက်ခွန်နှင့်ဖြစ်ရပ်များမှစတငျမီနံ့သာပေါင်းကိုအသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတော်များများကမျြးစာကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်လုပ်ရပ်များအတွက်လိုအပ်သောအဖြစ်နံ့သာပေါင်းရှို့ဟောပြောလော့။ နံ့သာပေါင်းကိုယဇ်ပူဇော်ဘာသာရေးထုံးတမ်းအတွက်ကိုးကွယ်ခဲ့သောပူဇော်သက္ကာ, အကိုးကွယ်ဆည်းနှင့်ကိုးကှယျခွငျးအားဖွငျ့ဆည်းကပ်၏တစ်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အများအပြားကျမ်းစာ၌ဝတ်ပြုမှုတစ်ခုလုပ်ရပ်အဖြစ်နံ့သာပေါင်းရှို့ပူဇော်သက္ကာအကြီးအရှည်မှာဖော်ပြထားသည်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအသုံးပြုတို့အားနံ့သာပေါင်း၏ကြင်နာများအတွက်ပေးထားသော၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်မီးလောင်ရာ။
တှေးတောဆငျခွစဉ်အတွင်းနံ့သာပေါငျး၏ Burning မှဆင်းသက်လာဆိုအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပါသလား
အကျိုးကျေးဇူးများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် astral ကမ္ဘာအရာမှာ, ဘာဝနာစဉ်အတွင်းနံ့သာပေါင်းရှို့မီးလောင်ရာကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းဟာ astral သို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်ကမ္ဘာကြီးထက် ကျော်လွန်. ရောက်ရှိရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းဟာစိတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာကမ္ဘာရည်မှတ်ဘာသာရပ်များအပေါ်တရားအားထုတ်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တမြေကြီးသားအကြီးအစိတျဓာတျနဲ့အငယျဆုံးသောမြေကြီးတပြင်ဝိညာဉ်တို့အားသစ္စာပေးသည်, သို့မဟုတ် astral ကမ္ဘာ၏သတ္တဝါမဆိုလျှင်, သူကနံ့သာပေါင်းရှို့မီးလောင်ရာကနေအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေနိုင်သည်။ သူပေးသောအကြိုးခံစားခှငျ့အတှကျအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ မြေကြီးတပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကိုအာဟာရကျွေးမွေးတော်မူ၏။ ၎င်း၏အနှစ်သာရလည်းမြေကြီးသားသတ္တဝါများနှင့် astral ကမ္ဘာ၏သတ္တဝါတွေအာဟာရ။ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းနှစ်ဆရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဆိုပါသတ္တဝါနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးတည်စေနှင့်နံ့သာပေါင်းသင့်သောအရာဖို့တခြားသတ္တဝါ repels ။ တဦးတည်းအချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုလျှင်, နံ့သာပေါင်းရှို့မီးလောင်ရာသောဤသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆွဲဆောင်နှင့်အဆင်ပြေထူထောင်အတွက်အကူအညီပေးနိုငျသညျ။ တဦးတည်းသူကိုအသုံးပြုဖို့မယ်လို့နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမျိုး၏သဘောသဘာဝကိုသိမထားဘူးသို့မဟုတ်သူလိုလားလျက်ရှိသောနံ့သာပေါင်းကို၏သဘောသဘာဝကိုသိမထားဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သူကမလိုလားအပ်သောနှင့်အန္တရာယ်သည်အဘယ်အရာ, အကြိုးခံစားခှငျ့အစားရပေမည်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် astral သို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်ကမ္ဘာရည်မှတ်တရားထိုင်ဖို့, sensuous အရာဝတ္ထုသက်ဆိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ကမ္ဘာ၏ဘာသာရပ်များအပေါ်လေးနက်ဘာဝနာအဘို့နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းမလိုအပ်နေပါတယ်။ စိတ်တစ်ဦးတည်းအတွေးနှင့်သဘောထားကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ဘာဝနာအတွက်ဝန်းကျင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သတ္တဝါလက်ထောက်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆုံးဖြတ်။ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းမကြာခဏ sensuous တ္ထုမှစိတ်ကိုရရှိထားသူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်လောကကိုရည်မှတ်တရားထိုင်ရန်လိုအပ်သော abstraction တစ်ပြည်နယ်ဝင်ကနေကာကွယ်ပေးသည်။
သူတို့က။ သူသည်မိမိဘာသာရပ်၏ရှိပါတယ်သတင်းအချက်အလက်များအော်ပရေတာ၏တနျခိုးပေါ် မူတည်. မြင်နိုင်နှင့်အခြား sensuous သက်ရောက်မှုသိသာပါလိမ့်မည်။ နံ့သာပေါင်းကိုမှပေါ်ပေါက်အဆိုပါအငွေ့များနှင့်မီးခိုးအလိုရှိသောနှင့်မဖြစ်၏သည့်သတ္တဝါထင်ရှားစေခြင်းငှါအရာအတွက်ခွန်အားနှင့်ပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ကပ်။ ဤသည်မှာမျှောဆရာနှင့် necromancers သူတို့ရဲ့ invocations နှင့် conjurations ၌နံ့သာပေါင်းကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နံ့သာပေါင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏မီးလောင်ရာအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်အခြားလေယာဉ်ပေါ်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး, မဟုတ်တဦးတည်း, ဤတွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားနှင့်သူ၏စိတ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သည်သူ၏အဘိဥာဏ်အာရုံရှိရမည်။ ထို့နောက်သူကသူတို့နံ့သာပေါင်းကိုကမ်းလှမ်းတဲ့သူတဦးတည်းနှင့်နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းမတက်ရောက်သည်အခြားရလဒ်များကိုထိခိုက်စေပုံကိုဘယ်လိုမြင်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်သတ္တဝါနံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းအားဖြင့်ဆွဲဆောင်သို့မဟုတ့်ပြီးရှောင်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲသိပါလိမ့်မယ်။